University of Tokyo - Ọmụmụ ná mba ọzọ na kasị mma mahadum nke Japan
tọrọ ntọala : 1877
Echefukwala -atụle University of Tokyo
Debanye aha na Mahadum nke Tokyo
N'etiti ngwa ụwa ọnụ, ọnụnọ nke nsogbu na a ga-ebu site kpọrọ mmadụ dị ka a dum, gụnyere depletion nke eke ego, mmebi nke gburugburu ebe obibi, ụwa nsogbu akụnụba na ịda ogbenye, na-aghọ mgbe ọzọ ka o di. Ejizi dị otú ahụ zuru ụwa ọnụ-ọnụ ọgụgụ mbipụta na-achọ ka a dịgasị iche iche nke ndị mmadụ ịkọrọ ha ihe ọmụma na ekemende ahu nagide ha na-akọrọ ihe ọmụma na-arụkọ ọrụ na-eme ihe. Ịzụlite nkà ndị ga na-edu ndú a nkekọrịta na itinye n'ọrụ nke ihe ọmụma bụ ihe kasị mkpa ọrụ nke University of Tokyo. Na ndabere nke a, anyị ga-akwụsị inwe ihe ịma aka iji obi ike na, amamihe na a echiche nke ibu ọrụ.
The akwọ ụgbọala odudu ke emepe emepe ndị a ihe ọmụma ọkachamara bụ, ọ baghịkwa uru ikwu, mmụta nke di n'etiti kasị pụta ìhè n'ime ụwa. M ga-karịsịa dị ka ihe ụmụ akwụkwọ ndị nwere obi ha ka on mmụta, nakwa dị ka-eto eto na-eme nnyocha, na-enweta obi ụtọ na ọṅụ nke ihe ọmụma na-ebute ụzọ research. Achọrọ m ka ha na-eji na ahụmahụ dị ka isi iyi nke ọgụgụ isi nri na-edozi ahụ emesi n'ime ha njikere ịzụlite onwe ha budata. M kweere na ha nwere University of Tokyo eje ozi dị ka a ebe ahụmahụ ndị a ga-ọ bụghị nanị na mete ọha na eze ndị e nyere ndị University ha na-akwado ma na-eme ka mmadụ ọha mmadụ n'ozuzu.
Ebe ọ bụ na ntọala, na University of Tokyo anamde utom nte agụmakwụkwọ isi n'ihi fusing Western na Eastern omenala, emepe emepe agụmakwụkwọ ọzụzụ pụrụ iche dị na ụwa na-erute ihe ọmụma o nwetara site ha na mba uwa. Ebu on a omenala ma n'otu oge eme atụmatụ maka ọdịnihu, M ga-ike a "zuru ụwa ọnụ isi n'ihi na ihe ọmụma mmekota,"Nke ga-jikọọ na ọchịchọ maka ihe ọmụma na itinye n'ọrụ nke ihe ọmụma na-adọta a iche iche n'usoro nke ndị mmadụ si gburugburu ụwa. Mgbe a na isi, M ga-achọ ịmụta ọhụrụ agụmakwụkwọ ọzụzụ na-eme ihe karịrị mba, omenala na generational ókè na transcend ẹdude ebe nke ọmụmụ maara dị ka Humanities na sayensị. Ọzọkwa, Achọrọ m iji na-akwalite ihe omume nke ga-ikwado imekọ ihe ọnụ dị n'etiti òtù na ụlọ ọrụ, ọchịchị na academia. Iji na-aghọta atụmatụ ndị ahụ, na University ga mbụ guzosie Graduate Schools na proactively na-aga na-asụ ụzọ nke ọhụrụ agụmakwụkwọ ọzụzụ na-interdisciplinary na ọdịdị na ikpokọta ma mma na mba na nke mkpebi.
Anyị ga-pịa na-atụ na ọmụmụ ha na-eme ka udo na ọdịmma nke mmadụ nile na ụmụ mmadụ, dị ka kwuru University of Tokyo Charter. Iji mee otú ahụ, ndị a n'oge a mgbe na ihu nke ọha mmadụ na-agbanwe agbanwe na ihe ngwa ngwa ọnụego, ọ dị mkpa iji kwadebe onwe anyị na mgbanwe na-azaghachi na-achọ n'aka n'oge ndị a. Mgbe ana-nguzosi ike ka ihe a ga-echekwawo dị ka omenala, usoro dum mgbanwe dị oké mkpa. Dị ka m guzosie ike ọganihu na Undergraduate izi mgbanwe nke heretofore a rụrụ, M ga-arụ ọrụ n'ebe a isi reevaluation anyị Graduate Schools, nke na-egwu a isi ọrụ na ọzụzụ nke ihe ọmụma ndị ọkachamara na e kere eke nke ọhụrụ uru. N'otu oge ahụ, mmejuputa a pesonel management usoro na-egosipụta okike hara nhata, mîdaha ọzọ na-eto eto ka ha kacha mma iji ihe ha ga-emeli, na-akwado ma agagharị ma kwụsie ike bụ a ọrụ ihe dị nnọọ mkpa ka m. Iji mee ka ọganihu na ndị a mgbanwe, anyị ga-eweli ọha mmadụ larịị nke ntụkwasị obi na sayensị na academia. Ntọala nke a pụrụ ịtụkwasị obi na-wuru na ihe ọma ndị mmanye nke nnyocha ụkpụrụ omume na ụkpụrụ nakwa dị ka ike nke na ọrụ na ikwado mmekota n'etiti ụlọ ọrụ na academia, bụcha ihe ndị dị oké mkpa ihe aga-eme na anyị na-enwe ugbu.
Site na-enwe ọganihu na ndị a iche iche mgbanwe, Ekpebisiri m ike ime ka University of Tokyo a mahadum nke na-ahuta ka mmadụ mkpa iji ndị Japan na ruo uwa dum; a University of Tokyo na-ama ama site nile.
Arts na Sciences
Humanities na Sociology
Iwu na Politics
Agricultural na Life Sciences
Ozi Science and Technology
Interdisciplinary Ozi Studies
The mahadum na-kwụrụ ụgwọ site Meiji ọchịchị 1877 n'okpuru ya ugbu a na aha site amalgamating okenye ọchịchị ụlọ akwụkwọ maka nkà mmụta ọgwụ na Western mmụta. Ọ e renamed “na Imperial University” na 1886, Ọzọkwa Tokyo Imperial University na 1897 mgbe Imperial University usoro e kere. na September 1923, ala ọma jijiji na-eso ọkụ bibie banyere 700,000 mpịakọta nke Imperial University Library. The akwụkwọ furu efu gụnyere ndị Hoshino Library , a collection of banyere 10,000 akwụkwọ. The akwụkwọ ndị ahụ bụbu onwunwe nke Hoshino Hisashi tupu aghọ akụkụ nke n'ọbá akwụkwọ nke mahadum na ndị tumadi banyere Chinese nkà ihe ọmụma na akụkọ ihe mere eme.
na 1947, mgbe Japan imeri ke World War II, ọ nd-ẹkekerede mbụ ya aha. Na mmalite nke ọhụrụ mahadum usoro na 1949, Todai loo mbụ Mbụ Higher School (taa Komaba campus) na ebe bụbu Tokyo Higher School, nke gaba chere bú ihe nke ozizi mbụ- na nke abụọ afọ undergraduates, mgbe ndị ezi ikike iche on Hongo isi campus lekọta atọ- na nke anọ afọ ụmụ akwụkwọ.
Ọ bụ ezie na mahadum e tọrọ ntọala n'oge Meiji oge, o nwere na mbụ mgbọrọgwụ na Astronomy Agency , Shoheizaka Study Office , na Western Akwụkwọ Translation Agency. Ndị a oru na ọchịchị itieutom guzosie ike site na 徳 川 幕府 Tokugawa shogunate (1603-1867), na rụọ ọrụ dị mkpa na importation na translation of akwụkwọ si Europe.
Kikuchi Dairoku, ihe dị mkpa na ọnụ ọgụgụ na Japanese mmụta, jere ozi dị ka onyeisi oche nke Tokyo Imperial University.
n'ihi na 1964 Summer Olympics, mahadum kwadoro agba ọsọ òkè nke oge a pentathlon omume.
on 20 January 2012, Todai ọkwa na ha ga-agbanwe mmalite nke ya agụmakwụkwọ site n'April ruo September ka mmezi ya kalenda na The International Standard. The nnofega ga-phased na ihe karịrị afọ ise. Ma nke a unilateral mara ọkwa na president natara merụsịrị na mahadum hapụrụ atụmatụ.
Dị ka Japan Times, mahadum nwere 1,282 professors na February 2012. nke ndị, 58 bụ ndị inyom.
N'ime ọdịda 2012 na nke mbụ, na University of Tokyo malitere abụọ Undergraduate mmemme kpamkpam kụziri English na a haziri maka mba ụmụ akwụkwọ - Programs na English na Komaba (Ọnụ ọgụgụ kasị elu) - The International Mmemme na Japan na East Asia na International Mmemme na Environmental Sciences. na 2014, ndị School of Science na Mahadum nke Tokyo ẹkenam ihe niile na-English Undergraduate nyefe usoro ihe omume a na-akpọ Global Science Agụmakwụkwọ (GSC).
Ị chọrọ -atụle University of Tokyo ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: University of Tokyo ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Tokyo.